'Iyo 7.5 Quake Kubva kuGehena' Puente Makomo Mhosva Inenge Inotyisa
Puente Hills Fault Line Inogona Kuva Nemhedzisiro Inoshungurudza
Nyanzvi dzinoti kudengenyeka kwenyika kukuru pamwe nechikanganiso chisingazivikanwe zvakanyanya chakapa Southern California kuzunungusa zvine mwero kunogona kukuvadza nharaunda kupfuura "Big One" yaityiwa kwenguva refu kubva kuSan Andreas Fault ine mukurumbira.
Iyo Puente Hills inokanganisa mhosva, iyo yakaunza Chishanu manheru kukura-5.1 kudengenyeka kwakanangana neLa Habra uye kwakapfuura 100 kudengenyeka shure neSvondo, inotambanuka kubva kuchamhembe kweAlexander County pasi peguta reLos Angeles kuenda kuHollywood - nzvimbo ine vanhu vakawanda munzvimbo yeLos Angeles.
Kudengenyeka kwenyika kune simba-7.5 pamwe chete nemhosho iyi kunogona kuratidza njodzi kupfuura imwe iri muSan Andreas, iyo inomhanya kumucheto kweguta reSouthern California, vakadaro vezvematongerwo enyika.
US Geological Survey inofungidzira kuti kudengenyeka kwakadaro padivi pePuente Hills kukanganisa kunogona kuuraya vanhu 3,000 18,000 kusvika 250 uye kunokanganisa kusvika kumadhora mazana maviri nemakumi mashanu emadhora. Mukupesana, kudengenyeka kukuru kwakakura masere pamwe neSan Andreas kunogona kukonzera kufa kwevanhu vanofungidzirwa kuva chiuru nemazana masere.
Kudengenyeka Kwepasi Kusvikira Ruzivo
2.53km S yeLa Habra, California 2014-03-31 14:31:13 UTC-07: 000.0 km
2.514km NNE of Crescent, Oklahoma 2014-03-31 13:04:55 UTC-07: 005.0 km
4.9North Mid-Atlantic Ridge 2014-03-31 12:51:15 UTC-07: 0010.0 km
5.0132km SW of Ongjin, North Korea 2014-03-31 12:48:36 UTC-07: 0015.9 km
2.51km SSE yeLa Habra, California 2014-03-31 12:14:06 UTC-07: 004.2 km
[btn link = "http://losangeles.cbslocal.com/2014/03/30/7-5-quake-on-puente-hills-thrust-fault-could-be-disastrous/" color = "grey" saizi = "Saizi-m" chinangwa = "_ chisina chinhu"] Verenga Chinyorwa Chakazara [/ btn]